350+ WhatsApp Mazita eBoka (Anonakidza, Akanaka & Akasarudzika) - Zvemagariro
350+ WhatsApp Mazita eBoka (Anonakidza, Akanaka & Akasarudzika)
Ichokwadi kuti vanhu vazhinji vari kushandisa Whatsapp. Iko hakuna muganho wezera. Zvinotyisa, India ine mamirioni avanhu vachishandisa iyi mameseji app. Asi, ndeipi pfungwa yekutaura uye kutumira mameseji vanhu kana pasina zvimwe zvinoshamisa uye zvakasarudzika WhatsApp Mazita eBoka?
Zvakanaka, zviri nyore uye zvakare nyore kunzwisisa kuti mameseji maapplication ari kuwedzera zuva nezuva uye ivo vari kuyedza kuwana zvakanyanya uye zvakanyanya kutariswa.Nekudaro, kana iwe uri weboka admin yechero WhatsApp group, vanhu vari kuzosiya boka kana vachiona richinetesa. Ipapo iwe unosara usina imwe sarudzo kunze kwekutsvaga nzira nyowani. Zvakanaka, kuwana rakasarudzika WhatsApp Boka Mazita kungangokubatsira iwe kunze kwechokwadi!
WhatsApp Messenger inzvimbo yakavharidzirwa yekutumira mameseji. WhatsApp inogona kushandiswa nyore nyore kutumira mameseji, mafaera, GIF mafoto, mavhidhiyo, uye zvakare odhiyo meseji kune vamwe vashandisi.
Whatsapp Statistics & Chokwadi (2020)
Maitiro Ekurodha pasi Instagram Vhidhiyo?
Ungaita Sei Gadzira Boka paWhatsapp?
Aya ndiwo matanho pazasi ekugadzira iyo Whatsapp boka zviri nyore:
Kutanga, vhura WhatsApp pafoni yako.
Wobva wadzvanya pane iyo 'Chats' menyu
Tinya pane yako Android's menyu bhatani
Dzvanya pane iyo Nyowani Boka sarudzo iri kumusoro kwemenu
Sarudza vanofambidzana kuti uvawedzere kuboka rako
Wedzera zita reboka rako
Sarudza mufananidzo weboka rako
Dzvanya pakaki yekona kurudyi kona kana iwe wapedza kugadzira boka.
WhatsApp Boka Mazita - Anonyanya Kushandiswa Chinyorwa (2020)
Akasarudzika WhatsApp Boka Mazita:
Usapinda muchikwata ichi
Saka anonzi maInjiniya
Iyo Walkie Talkies
Iyo Ruzhinji Nzvimbo
Nyora yako nzira
Kutamba nenzira yangu
Saka anonzi shamwari
Nyora Kusvika Wakaneta
Yakazara Pane Mast
Nyika yemberi zvombo
Vese Vakadzi Vakadzi
Chinzvimbo King Block Misoro
Tiri pano pamwe chete
Rainbow Warriors Boka
Nyora Kusvikira Wazvifinha
Iyo Fab Vanhu
Yakazara Pane Go Getters
Kuwana Yangu Nzira
Iyo Geek Bank
Iwo Jumping Jacks
Iyo Lady Bugs
Izvo uye izvo
Iyo Tarenda Hub
WhatsApp Mapoka Mazita Emhuri:
Iyo Chatty Perps
Tsvuku Tsvuku Nyaya
Iri Ropa Redu
Imwe Neimwe Inokosha
Isu Vanhu Vakapenga
Isu tinogovana ropa
Ndizvozvo Zvese Izvozvi
Chii Chiri Kubika Vanhu
Isu Tiri Mumwe
Iyo (Zita) Mhuri
Vanamai Vanotaura Zvakare
Iyo Mad House
Imwe neimwe Yakakosha
Chikwata Chinonzi Mhuri
Hwangu Hupenyu Hwemhuri
Mhuri Yemazuva Ano
Meri Yakanyanya Mhuri
Vakapenga Vanhu VeImba
Tose tiri vamwe
Mhuri Ho toh Aisi
Mhuri Yedu Inofara
Iwe zvechokwadi Unoshamisika
Vanhu vehupenyu hwangu
Iwo Anoshamisa Makumi
Iyo Ruzhinji Chikamu
Ehe, Tiri mhuri
Nguva Dzakanaka Tose
Hupenyu Hwose Kusungwa
Pamusoro Notch Imba
Mhuri yangu zvachose
WhatsApp Mapoka Mazita Eshamwari:
Vakoma kubva kuna amai vakasiyana
Akanaka Buddies muHupenyu
Madhimoni VS Ngirozi
Saka Vanodaidzwa maInjiniya
Vhiki Yevhiki Madzimambo
Mufaro Kwese Kwese
Zvakawanda Kupfuura Bros
Iyo Corporate Cowboys
Iwo Matatu Matutu Masutu
Empty Kofi Mukombe
Nhema Bhokisi Vanoedza
Makumi mashanu Shades eGrey's Anatomy
Pasi Pose Kunetswa
Schindler's Yakabatanidzwa Chinyorwa
Wiki Inodonha, Hatidi
* Kambani zita kana chidimbu * Varanda
Kuongorora kuri Kuuya (?)
Chirongo Pfungwa Dzangu
Shanivar Raati .. (Zvakare, Mugovera Manheru)
Zvakanakisisa Pakati Pezvakanaka
Misika iri Kukwira
Zvinosekesa WhatsApp Boka Mazita:
Iyo Adventures Yezve Textin
Hapana Chebhizinesi Rako
Ngatishandisei Nguva Inokosha
Vadziviriri va Superman
Usatarise Status Kusvikira Ndabvunza
Kutsvaga Boka Rezita
404! Zita reboka Haripo
Usatarise Nguva Dzese
Ah Mhoroi Bros
Inzwa wakasununguka kunyora
Tariro isina boka
Isu Tese Vakadzi Vakaroora
Joinha panjodzi yako wega
Unoda-Iva Akanaka Varume
Tinoshanda nesimba, Tinopembera zvakanyanya
Iwe Unoziva iyo Drill
Chena Collar Crew
Tinorevei neZita reWhatsapp Boka?
Zviri nyore kwazvo. Mazita eboka reWhatsapp mazita mapfupi kana akareba akaenzana zvinoitwa neboka pane app yekutumira mameseji. Nekudaro, kana iwe uri admin weboka chero ripi zvaro, unogona nyore kuripa iro rakasarudzika zita.Nekushandura rako reWhatsapp boka rezita kubva kune rimwe risinganzwisisike zita kuenda kune chimwe chinhu chakasarudzika, zvinonyatso kuisa boka rako pakati pepamusoro uye zvakanakisa ipapo!
Ungaita sei shandura mazita eboka paWhatsapp?
Kana iwe uchida kuisa rakasiyana zita kuboka reWhatsApp kana kungochinja mazita eboka paWhatsapp, tevera anotevera matanho:
Kutanga Whatsapp Messenger pafoni yako
Tsvaga iro chairo boka raunoda kushandura zita
Vhura iyo chat chat yeboka rimwe chete
Dzvanya pane iyo icon icon yeboka
Wobva wadzvanya paPenzura icon kurudyi kwechiratidzo cheboka uye nenyaya.
Isa zita idzva uye rakasiyana reboka, wobva wadzvanya pane OK.
Paunenge wapedza nematanho ese aya zvobva zvangoitika zita reboka idzva richachinja uye vese vashandisi veboka rimwe chete vanozokurumidza kuziviswa kuti Admin yachinja zita reboka.
Kuti uvandudze ruzivo rwako rwekukurukura uye kuti riite seriri nani uye rinonakidza, unogona kusarudza chero ripi zvaro riri pamusoro apa WhatsApp Mazita Eboka uye woita kuti boka rako rinyanye kutaridzika nemazita eApple Boka. Iri pamusoro runyorwa rine runyorwa rwemazita eboka, kutanga kubva kuchitonho, chakasarudzika, chakanaka, chinosekesa uye chakanakisa mazita eWhatsApp Boka.
Tarisa TV Shows Pamhepo (2020)
Tora Disney Plus Discount Yevadzidzi
Sei Kudzosera Mutambo paSteam?
amazon zvipo makadhi ekuongorora
akanakisa emafirimu ekushambadzira masaiti emahara
sei mahara emahara hapana kurodha pasi
maitiro ekuona mavara evadzidzi
yemahara online terevhizheni masevhisi